कसरी बन्ने त सफल उद्घोषक | eAdarsha.com
भाद्र २६, २०७०
विविध सभा, समारोह वा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रथमतः बोल्ने वा कार्यक्रमको बारेमा क्रमबद्धरुपमा दर्शक वा श्रोतालाई जानकारी गराउने व्यक्तिलाई उद्घोषक भनिन्छ। उद्घोषक पाँच अक्षर मिलेर बनेको छ। जसमा ‘उ’ भनेको उत्कृष्ट आवाज भएको ‘द’ भनेको केही दक्षता हासिल गरेको, ‘घो’ बाट घोषणा गर्ने व्यक्ति ‘ष’ बाट सटिक जवाफ दिने व्यक्ति र ‘क’ भनेको कर्ण्र्ााप्रय आवाजको धनी या काल्पनिक शक्ति भएको भन्ने बुझिन्छ। सफल उद्घोषक बन्ने इच्छा राखेरमात्र हुँदैन, जसका लागि उचित र सही शिक्षाको आवश्यकता छ।
सम्पूर्ण पाठकवृन्दहरु जो विविध कार्यक्रममा ढुक्क भएर बोल्न चाहना राख्ने व्यक्तिहरुका लागि सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले यस सम्बन्धी आÇना केही अनुभव तथा धारणाहरु यस लेखमार्फत् प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु। आशा छ यसलाई पढेर केही आÇनो बोल्ने कलामा विकास गर्नुहुनेछ।
सर्वप्रथम त एक कुशल उद्घोषक बन्नका लागि छधज्ञज को ज्ञान हुनु नितान्त आवश्यक छ। छधज्ञज भनेको नेपालीमा छ ‘क’ भन्ने बुझिन्छ।
आउनुहोस् चर्चा गरौं छ ‘क’ भनेको के हो भन्ने सम्बन्धमा जसरी छध भनेको ध्जबत – ध्जभचभ – ध्जभल – ध्जय- ध्जथ – र ज्यध – भन्ने अर्थ लाग्छ। नेपालीमा छ ‘क’ भन्नाले कार्यक्रमको के हो ? कार्यक्रम कहाँ हुँदैछ ? कार्यक्रम कहिले हुँदैछ ? कार्यक्रमको आयोजक तथा प्रायोजक को हो ? कार्यक्रम कसरी हुँदैछ भन्ने कुराको ज्ञान एक कुशल कार्यक्रम उद्घोषकमा हुनुपर्छ। कार्यक्रमको सुरुवातमा नै यी ६ वटा प्रश्नको उत्तरको आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ। छधज्ञज को आधारमा कार्यक्रम चलाउँदा प्रस्तुत गरिने सानो उदाहरण ‘नमस्कार, आज मिति २०७०/०५/०१ शनिबारका दिन। यस जनचेतना आमा-समूहको आयोजनामा हुन गइरहेको ग्रामीण भेगमा बस्ने एकल तथा असहाय महिलाको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको १५ दिने सिलाई बुनाई तालिमको समुद्घाटन समारोहमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरुमा म कार्यक्रम सञ्चालक ‘ को तर्फबाट न्यानो न्यानो अभिवादन’।)
अब चर्चा गरौं, एक कुशल उद्घोषकमा हुुनुपर्ने गुणहरुबारे
-छधज्ञज को पूर्णज्ञान
-यान्त्रिक उपकरणबारे सामान्य जानकारी।
-शब्दको शुद्ध र सही उच्चारण
प्रायश्चित भावनासँगै विनम्र बोली
-माइक्रोफोन टेष्ट गर्ने बेलामा फु”फु”फु” गर्नुहुँदैन। बरु माइक्रोफोन टेष्ट गर्दा हेलो ”हेलो” हेलो १,२,३ भन्नु राम्रो हुन्छ।
-माइक्रोफोन अगाडि हेलचेक्राई गर्नुहुँदैन।
-गोजीमा हात राख्नु हुँदैन। शरीर हल्लाउनुहुँदैन, खुट्टा हल्लाउने नगरौं।
-नाक, कोट्याउने, कान कोट्याउने तथा कपाल कनाउने जस्ता काम पनि गर्नुहुँदैन।
-नङ टोक्ने, पेन टिक-टिक पार्ने, पैसा बजाउने काम गर्नुहुँदैन
-ध्यान अन्यत्रतिर लैजाउनु हुँदैन
-समयप्रति वे-वास्ता गर्नु हुँदैन
-राष्ट्रभाषाको अनादर गर्नु हुँदैन
-अनावश्यक वैदेशिक भाषाको प्रयोग गर्नुहुँदैन
-वक्तालाई आक्षेप लगाउनु हुँदैन
-व्यक्तिगत तर्फबाट कुनै पनि वक्तालाई उतारचढाव गर्नुहुँदैन
-ठाडो र अशिष्ट भाषा प्रयोग गर्नुहुँदैन
-शब्द दोहोर्‍याउनु हुँदैन
-कुनै पनि थेगो प्रयोग गर्नुहुँदैन
-जाँड, रक्सी, चुरोट, बिंडी, अमिलो, पिरो, चिल्लो, प्याजजस्ता चिज सेवन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुँदैन।
जब गाउँ फर्के, जे देखें त्यही लेखँ
कृष्णअन्जान ज्ञवाली, जेठ २७, २०७६
रोल्पामा बिरामीको चापलाई धान्ने गरी न स्वास्थ्यकर्मी छन न त स्रोतसाधन नै । सीमित जनशक्तिले चाहेर पनि सबैलाई स्तरीय सेवा दिन सम्भव नभएको त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ । दैनिक १०० भन्दा बढी बिरामी सेवा लिन आउने यो अस्पतालमा आवश्यक चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा सेवाग्राही मार्कामा पर्ने गरेको डा घर्तीले बताए । रोल्पा, १ असार ।…